ECameroon: umkhankaso omuhle womkhakha we-cocoa - JeuneAfrique.com - T mov RELAY
Accueil » UMNOTHO »ECameroon: umkhankaso omuhle womkhakha we-cocoa - JeuneAfrique.com
ECameroon: umkhankaso omuhle womkhakha we-cocoa - JeuneAfrique.com
Ekupheleni kwesizini ye-cocoa ye-2018 / 2019, eqedwe ngoJulayi 15, iCameroon yabona ukuthengiswa kwayo kukhuphuka nge-25%. Ukuqagela kubuye kuqhutshekwe nomsebenzi okhulayo wokuqhakambisa umkhiqizi we cocoa wesine ngobukhulu emhlabeni ufuna ukuqinisa.
Esimweni lapho kwethulwa umkhankaso we cocoa we-2019 / 2020 endaweni yaseSangmelima, ngaphezu kwe-100 km eningizimu yeYaoundé, iHhovisi likaZwelonke leCocaoa neKhofi linikeze ukuhlola okuhle ngomkhankaso osuqediwe, kufake isandla i-11% yokuthekelisa kwe-2018 yezwe. Kukhuphuke nge-4,2% kusuka kwisizini edlule, ukukhiqizwa kukokoko okwathengisiwe kwakungamathani we-264 253 tonnes.
Lokhu kukhuphula izinzuzo ngaphezu kwakho konke kusuka ekugxumeni kwe-25,6% yokuthumela, kuya kumathani we-214 825, ngemuva ukwehla kwe-13,3% ngesikhathi somkhankaso we-2017 / 2018. Ukwehla lokhu kubangelwe yinkinga yezokuphepha ebilokhu ithinta iminyaka emithathu eyedlule izifunda zase-Anglophone eningizimu-ntshonalanga - okuyisikhathi eside ithathe indawo yokuqala yezwe yokukhiqiza - kanye neNorth West. Amachweba e-Amsterdam naseJakarta athola i-74,41% kabhontshisi waseCameroonia.
Izinga elikhulayo lokukhiqizwa okuthengisiwe, eqinisweni, liholele ekwehlekeni kwezitokwe ekugcineni kwesizini. Lokhu manje sekungamathani we-18 035, kanti bebefinyelele ezingeni lomlando ngamathani we-27 159 ekupheleni komkhankaso owedlule.
Njengomsebenzi obaluleke kakhulu kwezomnotho ezweni lonke ngoba ukhiqiza ukushintshaniswa kwamanye amazwe, umsebenzi wokulungisa cocoa uvuswe yizinyathelo zentela ye-2017, okuholele ekutshalweni kwemali okukhulu yizinkampani. Ngemuva kokugxumela ngaphezulu kwe-61% ngesikhathi somkhankaso we-2017 / 2018, inani lekhukhamba elicutshungulwe lenyuke ngo-9,6% ngesizini edlule laya kumathani we-58 522. Ukuvela kwemvelo okuqhutshwa ngokwanda komthamo wama chocolatiers UBarry Callebaut, I-Ferrero ne-Tiger Brands, ngokusebenzisa imixhaso yabo yasendaweni.
Izinga lokucubungula kulindeleke ukuthi likhuphuke ngenkathi ezayo, ngokungenela umsebenzi ngo-Ephreli wokugcina weNeo Industry, ohlose ukucubungula amathani we-26 000 ngonyaka. Ngokufanayo, iyunithi entsha yeqembu I-Atlantic Cocoa Corporation inikeza ukwelashwa kwaminyaka yonke kwamathani we-48 000.
Umkhiqizi wobhontshisi wesine ngobukhulu emhlabeni, njengamanje iCameroon inabalimi abangaphezulu kuka-600 000 cocoa abahlomulile phakathi nenkathi ngamanani aphezulu. Inani eliphakeme kakhulu lokuthengisa kwabakhiqizi yi-1270 F CFA / kg futhi inani eliphansi i-650 F CFA / kg ngokumelene ne-1210 F CFA ne-550 F CFA ngokulandelana ngesikhathi somkhankaso we-2017 / 2018.
EGabon: ISogatra izama ukuphuma kulokhu kungenziwa ngaphambi kokufika kweTrans-Urb - JeuneAfrique.com
IRussia: ukuziphindiselela "komfushane" ezwenikazi lase-Afrika? - I-YoungAfrica.com